Global Voices teny Malagasy » Hisokatra Ao Rosia Ny Foibe Fanarahamaso ny Propagandy sy ny Fandisoam-Baovao Ato amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Marsa 2016 4:48 GMT 1	 · Mpanoratra Tetyana Lokot Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna, Akon'ny RuNet
Ny foibem-baovao ao Innopolis hanara-maso ny fandrahonana ara-baovao ao amin'ny aterineto Rosiana. Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Nandray anjara tamin'ny Dinika Ara-toekaren'ny Aterineto ny filoha Rosiana Vladimir Putin tamin'ny Desambra 2015, izay nanomezany soso-kevitra fa tokony ataon'ny sampam-piarovana Federaly Rosiana sy ny sampan-draharaha-panjakana hafa ho laharam-pahamehana indrindra ny “fandrahonana ara-baovao” ary mitady fitaovana entina manara-maso izany fandrahonana an-tserasera izany.
Ankehitriny, napetraka hatomboka ao Innopolis, “tanàna marani-tsaina” Rosiana vaovao, noforonina ho toy ny zanabolana any Kazan, renivohitry ny Repoblikan'i Tatarstan Rosiana ny foibem-baovao ho fanarahamaso ny fanafiham-baovao. Miorim-paka ao anatin'ny indostrian'ny teknolojia avo-lenta ny toekaren'ny tanàna, ka mazava ho azy raha manatontosa ny tetikasany ao i Natalia Kasperskaya, Tale Jeneralin'ny InfoWatch sy mpiara-manorina ny Antivirus goavam-be “Kaspersky Lab”.
Nilaza  tamin'ny fampahalalam-baovao Vedomosti i Kasperskaya fa anisan'ny valin'ny soso-kevitra avy amin'i Putin mba hanosika haingana ny fiarovam-baovao ny foibe. Efa manana sampan-draharaha miasa amin'ny fanoherana sy famaliana ireo fanafihana an-tserasera i Rosia, hoy izy, saingy mamerimberina izy fa ny fikambanany no ho voalohany amin'izany karazany izany, dia ny fanaraha-maso sy fisorohana ny fanafihanam-baovao amin'ny aterineto.
Nilaza i Kasperskays fa mitady mpampiasa vola ho an'ny tetikasa izy amin'izao fotoana izao, saingy miaiky kosa izy fa amin'ny fanombohana, hiasa indrindra amin'ny fanampiana ara-bola sy famatsiam-bola avy amin'ny governemanta izany, ary hisahana ny “filàn'ny fanjakana sy ny vahoaka.”
Ny foibe fanarahamasom-baovao dia hevitra iombonana avy amin'i Kasperskaya sy i Igor Ashmanov, Tale Jeneralin'ny “Ashmanov sy ny mpiara-miombon'antoka,” mpiantsehatra lehibe eo amin'ny tsenan'ny media haino aman-jery sy ny fifandraisana Rosiana. Faritan'i Ashmanov ny fanafiham-baovao ho toy ny “hetsika propagandy, fandisoam-baovao, votoaty hosoka sy natao halaza haingana”, ary mihevitra fa misy kinendry ara-politika izany karazana hetsika izany. Ny tsena ho an'ny fanalefahana ny fanafihana tahaka izany , araka ny filazan'i Ashmanov, dia tsy mbola nisy naka ara-virtoaly raha Rosia.
Mieritreritra ireo mpiara-miasa fa hanaramaso ny habaka mampiasa ny teknolojia novokarin'i Kribrum- tetikasa hafa iarahan'i Kasperskaya sy Ashmanov ny foibe. Afaka mikiky votoaty an-tserasera sy manadihady izany ho an'ny fihetseham-po sy ny fiotanam-po ny fanadihadiana media sosialy ataon'ny Kribrum  sy ny lazany amin'ny fitantanana ny rindrambaiko . Nilaza i Ashmanov fa efa ampy lenta ny fahaizamanaony ahafahana mamantatra mialoha izay fanafiham-baovao antserasera raha vao manomboka izany, sy ny mamantatra ireo mpikarakara izany. Ny ankamaroan'ny ezaka fanarahamaso dia azo inoana fa hikendry ireo tambajotra sosialy sy ny tontolon'ny bilaogy Rosiana, izay mavitrika indrindra ny “fanosoram-potaka” anaty adihevitra ara-politika sy ara-panoharana .
Manana fehezan-dalàna mifehy ny resaka vaovao ao amin'ny aterineto i Rosia, mikasika ny heloka antserasera ny ankamaroan'izany: ny andininy faha-272 ao amin'ny fehezan-dalàna Heloka Bevava dia mamaritra ny fidirana tsy ara-dalàna amin'ny vaovao ao amin'ny solosaina; ny andininy faha-273 dia mamaritra ny sazy ho an'ny “famoronana, fampiasana sy fizarana rindrambaiko mpisompatra amin'ny solosaina”; ary ny andininy faha-274 dia manoritra ny “fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fampiasana solosaina, ny rafitry ny solosaina na ny tambajotran'izy ireo.” Ireo izay manitsakitsaka ireo lalàna ireo dia iharan'ny sazy isan-karazany, arakaraka ny hamafin'ny ny heloka; manomboka amin'ny lamandy sy ny asa ho an'ny fiarahamonina hatramin'ny fisamborana sy ny sazy an-tranomaizina hatramin'ny fito taona.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa 2016, nanome sazy roa taona an-tranomaizina ho an'ny mpiserasera iray voampanga ho nikotroka fanafihana DDoS tamin'ny tranonkala ofisialin'i Kremlin ny fitsarana Rosiana iray ao an-tanànan'i Kurgan. Voalaza fa niaiky ny helony ilay mpiserasera, ka nahantona ny saziny.
Nitatitra  ny Fikambanana iray tsy miankina mpiaro ny zon'olombelona Rosiana Agora fa na dia mijanona ho fitaovana lehibe amin'ny politikan'ny aterineto Rosiana aza ny fanivanana sy fanakànana votoaty, dia heverina fa tsy mahomby loatra izany noho ny sivana marobe isan-karazany ataon'ny tsirairay.
Ao anatin'ny ezaka hanafoanana ny fanaparitaham-baovao sy ny fahalalaham-pitenenana amin'ny fomba mahomby kokoa, dia miezaka mampitombo ny teritery eo amin'ny mpiserasera ny manampahefana Rosiana, ary izany no isian'ny porofo avy amin'ny hetsika fanarahamaso tahaka izay naroson'i Kasperskaya sy Ashmanov izay hita fa ilaina, indrindra rehefa miampanga mpiserasera aterineto amin'ny fandikan-dalàna toy ny fandefasana fitaovana mahery fihetsika (extremista). Manamarika ny Agora fa ny sazy an-tranomaizina mitombo hatrany noho ny fanaovana ekeko (like) sy ny fizarana vaovao tao amin'ny media sosialy dia ikendrena hanandrahonana ireo mpiserasera sy manakana azy ireo tsy hiadihevitra momba ny olana ara-tsosialy sy ara-politika saropady ato amin'ny aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/03/31/80698/
 nanome : https://slon.ru/posts/64704